mhando 0.9.3 – Kupi mireza vangu kuenda?
The transposh.org Wordpress Plugin showcase nerutsigiro paIndaneti
Chivabvu 10, 2013 kubudikidza chipo 40 Comments
Havana kuenda kure, Ndapota tarisa vhidhiyo iyi kana kuverenga mirayiridzo pazasi.
Unofanira kuitei kuti kudzokera?
Just ndiwedzere zvizere shanduro uchishandisa zvinotevera:
Ndiwedzere ichangobva shanduro kubva wordpress.org (izvo zvichava ekupedzisira, ipapo)
Check “kubvumira ndiwedzere wakazara Version” mu pazviruva
Wongororai kuti upgrades uye kuita kuti ndiwedzere, ndizvo zvose!
Chii chitsva shanduro 0.9.3:
Update achashanda kubva yedu yepaIndaneti
Vamwe tsikidzi unocherekedza
Kugona kubvisa rel = chinjana chakanga isinakukodzera nguva dzose
(0.9.3.1) Takaita zvabudisa dzesub shanduro kuti nokupinza mitauro mitsva rinotsigirwa Google, kuita kwedu zvachose kuverenga – 73! (Kana munhu pano anotaura Hmong, tapota contact us)
Tinovimba zvauchasangana kunakirwa shanduro iyi.
Ina Under: General Messages Tagged With: azere version, kuduku, rusununguko, Video, wordpress.org
Italian Real Estate anoti
Chivabvu 10, 2013 pa 5:37 pm
Ini aitarisa bhokisi "kubvumira ndiwedzere kune zvizere Version" iri pazviruva asi hazvigoni kuona pandinenge Check kuti upgrades uye kuita kuti ndiwedzere,
Ungakwanisa Ndapota tsanangurai
Chivabvu 10, 2013 pa 7:22 pm
Munguva Wordpress sidemenu, pane “dashboard” uchiteverwa “reserved”
Chivabvu 10, 2013 pa 8:26 pm
ndatenda, kuti anotarisa zvakafanana unomushandira.
Chivabvu 23, 2013 pa 7:08 pm
achaita basa iri kana ndiri kushandisa Multi nzvimbo?
Ini rarira ari update muna rimwe nzvimbo asi hazvina kuratidza kukwira mumidziyo yangu arun?
Thanks rubatsiro rwenyu
Chivabvu 24, 2013 pa 7:50 ndiri
Haana kuedza nayo, vanofanira kushanda.
zvakaipisisa nyaya, kukopa plugin mafaira kubva pano uye kunatsurudza manually.
Chikumi 20, 2013 pa 2:21 pm
Hi ngaavongwe zhinji zvinoshanda pamusoro Multi nzvimbo 🙂
Chivabvu 24, 2013 pa 10:00 ndiri
saka, nei update I chete akaita, kuuraya petsanga pakutanga?
Handizivi kundoitora. Sei ndaifanira kukopa imwe plugin kubva website yako ikozvino, izvo zvinofanirwa kushanda kubva Wordpress dzigare mairi?
Coudl here kupindura sei uri kumanikidzira vanhu kupinda ichi?
Chivabvu 26, 2013 pa 12:10 ndiri
tsime, Ini pfungwa kuverenga izvi uye yapfuura romukova, Handisi kumanikidza munhu kuita chinhu, iwe angaisa chero uchida kubva apo narinhi uchida.
Chikumi 12, 2013 pa 1:19 ndiri
Ini akatevera Tutorial asi havaoni paine mireza unokwira… batsira! 🙁
Chikumi 12, 2013 pa 1:57 ndiri
Chiregedza – chete akagadzirisa nayo. Ndezviya unofanira wodzokera chaiko Widget uye wasarudza mureza nezvechisarudzo PASHURE updating. Ndatenda!
Mbudzi 22, 2016 pa 11:07 ndiri
kuvonga murume, yenyu akapindura akandibatsira. Ehe, pashure updating, unofanira kudzokera DASHBOARD>chitarisiko>Widgets, ipapo uchaona nzira dzakawanda kuti mireza kuratidza.
akavonga uye rudo kubva Switzerland.
Chikumi 27, 2013 pa 11:55 pm
wodzokera chaiko Widget??? asi apo?
Ini ndakakunda akagadzawo rokupedzisira shanduro Transposh Plugin…9.3!
Ini vakatevera vhidhiyo rubatsiro… asi handigoni kuwana apo mureza nezvechisarudzo iri.
Ndinoda kushandisa Flags pachinzvimbo ja chinyorwa(zita Language).
Ndingaisa petsanga sezvo default ? Ko zvakanaka nezvechisarudzo yokugadza??
Thanks mu advace – Ciro
Chikumi 28, 2013 pa 12:08 ndiri
Just dzifambirane zvizere shanduro.
Chikumi 28, 2013 pa 2:26 pm
Ndakazviita! Asi configuration peji iri plugin hakuna chero nzira kusarudza mireza panzvimbo “Chirungu” – “ChiRussian” nezvimwewo (zita mitauro).
Aripiko bhatani kusarudza mireza?
Chikumi 28, 2013 pa 10:21 pm
Kana wasarudza Widget unogona kushandura maitiro ayo, izvi kwete plugin nzira asi chaiyo Widget chitarisiko, panzvimbo imwe unogona kuchinja zita, nezvimwewo.
Chikumi 28, 2013 pa 10:50 pm
Ndatenda… zviri chakakwana!
Handina kumboona selector mu Widget nharaunda.
va pachena anoti
Nyamavhuvhu 13, 2013 pa 10:26 ndiri
Ini chete weekly kuna WordPress 3.6 uye inowanikwa pakati pamadziro shanduro zvachinja zvachose. Asi kuipa ndechokuti handigoni sokuti havasi kugadzirisa chero rugwaro rugwaro rakashandurirwa. Ndakaita update Transposh ichangobva shanduro uye neniwo akaita “Bvumira ndiwedzere kune zvizere Version” izvo haana kushanda kwakarurama. Ndapota regai azive zvokuita kuti vawane pamadziro basa rokushandura (pamwe orenji uye girini shoma mabhokisi kuti tinya :). Ndatenda!
Nyamavhuvhu 13, 2013 pa 1:41 pm
Nyamavhuvhu 14, 2013 pa 12:15 pm
makadii, Ini yakatoiswa plugin uye zvinoshanda zvakakwana Transposh. Dambudziko rinouya kana ndinoenda maberere uye ini tinya pikicha kuti vawedzere nayo uye hwindo inooneka Mupumburu pasi uye nguva dzose ndinopa chinotevera mufananidzo zvinofamba zvakawanda, chinhu vachinyara kwazvo uye inelegant. mifananidzo Usati kugadzwa Transposh akazviratidza ari Popup hwindo asi hazvina kufamba kubva mumba kutamira chinotevera Photo. Ndinofunga vachaparidza Vamwe kusapindirana pamwe plugin netori Lightbox 2. Ndingaita sei kugadzirisa dambudziko iri? kuvonga!
Nyamavhuvhu 14, 2013 pa 2:13 pm
Havagoni chaizvoizvo kubatsira kana iwe anopa URL apo dambudziko iri kuoneka
Nyamavhuvhu 14, 2013 pa 2:31 pm
Nyamavhuvhu 14, 2013 pa 2:34 pm
makadii, Yatova kuonekwa zviri URL. kuvonga.
Nyamavhuvhu 14, 2013 pa 2:12 pm
Handikwanisi kuona Flag kunyange pashure updating kuti Plugin kusvika Latest shanduro. Ungabatsira ini kuchigadzira ..?
Nyamavhuvhu 14, 2013 pa 2:14 pm
Iva nechokwadi iwe kuisa zvakakodzera Widget manyorerwo nechitarisiko / Widgets submenu
Nyamavhuvhu 14, 2013 pa 2:17 pm
Yakatarira izvozvo.. Ndisati Updating I dint akaona selector mu Widget.. Thanks Authors… Awesome Plugin… Kutenda kwazvo
Nyamavhuvhu 17, 2013 pa 9:29 ndiri
Website yangu parizvino muchiHebheru (kodzero mutauro kuruboshwe) uye ndinoda kuwedzera US Chirungu pamwe. Chinetso ndechokuti pashure ini paIndaneti kuti chivhariso mu, yangu yose Wordpress control panel akabva echiHebheru Chirungu, uyewo Website kushanduka ruvara rwayo (yose Website pavakabhabhatidzwa dzichienderana kuruboshwe). Saka ini Akatya uye Akaremara chivhariso mu. Ini ndiri itsva Wordpress uye zvakajeka, handisi paigona zvandiri kuita saka ndakanga kushamisika vari vangu nzira? Ndakaona vamwe Tutorials apo mitauro akawedzera vakanga zvose kuruboshwe ndivo, uye hapana chakaitika kwavari…
Please ndibatsirei! 🙂
Ndinokutendai zvikuru pachine,
Nyamavhuvhu 17, 2013 pa 11:09 ndiri
Zvamuoona ndechekuti Transposh anochinja Nzvimbo maererano mutauro,
Kugadzirisa izvi, ndapota kuisa Hebrew sezvo default mutauro muna Transposh kana chokukuvadza kuti Nzvimbo kusangana nzi pazviruva,
Yeuka hitchhiker wacho muperekedzi pechifukidziro.
Paul Thomson anoti
Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 2:55 pm
Nei iwe kunogara kure WordPress dzigare mairi? Unoda vanoda Backlink kuti website yako kana izvi tingasarudza / unobhadharwa ropafadzo?
Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 10:59 pm
Kukurudzirwa kure nekuti ndakanga ndisisakwanisi kuvimba nayo,
kumbozvifarira, haasati kuzvireva, vasarudze-kunze Vs. vasarudze-mu (kana Code kunze)
Nyamavhuvhu 20, 2013 pa 10:31 ndiri
Hello zvakare, Ndakanyora mazuva mashoma apfuura asi vachingove hapana mhinduro. ndapota, munhu munoziva Ndinogona kugadzirisa kusapindirana kuti zvinowanisa kwandiri Transposh plugin pamwe netori Lightbox2? Kana iwe akavhura Gallery anozarura hwindo uye pakarepo kanonyangarika, kuti ndikuonei kuenda pasi peji. Izvi zvinoitika nguva dzose ndinokuzivisai kuona pamufananidzo unotevera, kuwedzera kunoita pazasi. Chii zvichiitika? Ndiri mutsva uyu uye kwete kufunga chii chingava kukanganisa.
Izvi chete chinoitika achitora ini Transposh plugin kusashanda, pandinovasiya mifananidzo tarisa zvakakwana.
Mumwe mubvunzo Ndine ndechokuti maberere haana kuonekwa Chirungu uye Catalan.
Ndakatora mazuva akawanda iyi uye ndiri kuenda pusa. ndapota, mumwe anondipa ruoko?
Gunyana 5, 2013 pa 10:44 pm
Chekutanga, Ndinokutendai nokuti basa guru yawakaita kusika plugin ichi.
Ndine chikumbiro chidiki : Ndingaita sei kuwedzera pakutanga imwe neimwe ine mutongo iri rakashandurwa ?
Ndinoda kuyambira vaverengi kuti inotevera chinyorwa rakashandurirwa ne Google kana Bing kana ….
Gunyana 5, 2013 pa 10:58 pm
Tarisa shortcodes (pamusoro http://trac.transposh.org) uye kushandisa not_in remitemo, Ivai nechokwadi chekuti kushandura mumutauro default kwakaita.
Gunyana 6, 2013 pa 10:12 ndiri
wahou wahou ! Kuti anoshanda chaizvoizvo zvikuru !
Gumiguru 31, 2013 pa 10:45 ndiri
Ndakaedza updating kune zvizere sezvo murayiro wenyu. Asi handigoni kuwana update kuratidza kumusoro zvose. Wati rarira “Bvumira upgrading kune zvizere Version” uye kuponeswa, asi hapana update showes kukwira. vane 0.9.3 mhando. Vakaedza kutema nokubuda, Akamira mazuva uye maawa. Rarira pamusoro uye kure uye zvichingodaro. No update. Ndinoda petsanga kushanda! Uyewo shanduro asisiri mabasa zvinoita…
Gumiguru 31, 2013 pa 11:05 ndiri
Pane dambudziko iri Wordpress 3.7, kukonzerwa nokuchinja pamusoro update URL kuti haasi triggering ari update muitiro,
Kune mhinduro maviri:
1. shanduro 0.9.4 achabudiswa kuti WordPress.org izvo zvichaita kuzodzosera dzinoita update
2. manually kukopa faira kubva pano uye kuita update
Gumiguru 31, 2013 pa 11:07 ndiri
OK. Ndatenda! Akafunga ndakanga ndava kupenga kana smt! 😉
Chero pfungwa apo?
Gumiguru 31, 2013 pa 11:08 ndiri
Kukurumidza kukuru (vanofanira kuita dzimwe bvunzo asati kusunungura)
Gumiguru 31, 2013 pa 11:10 ndiri
OK. Kutonhora. Uye nemhaka rako rose iri! Anobatsira zvakawanda nyore ini kubudisa uye vamwe kuti vanzwisise!
Zvita 10, 2013 pa 10:06 ndiri
Ndakanga kunonoka kuita ndiwedzere kuti shanduro iyi nokuti ndaifunga ndinoda vandisunungure zvose petsanga kana vasingakwanisi kusarudza yakawanda mitauro… Chii benzi ndakanga! Sezvo dzakawanda plugins vanoshandisa, Ndinotenda chaizvo isu Wanna kuwana chinhu vakasununguka uye kuti nguva dzose anoshanda. I Wanna congrats transposh guru basa uye nokundiita kuti kumbomira inenge nzira yokuudzoserazve nerimwe zuva.
Zvita 12, 2013 pa 6:39 pm
ngaavongwe nokuti mashoko enyu omutsa
kero email haangazozikamwi ichibudiswa. Raida minda anozivikanwa *
Current munofanira @ R *
Siyai munda uyu chinhu
Tinoda kutenda Sponsors edu!
Connecting collectors: mari, inoratidza uye zvakawanda!
Vidyut pamusoro mhando 1.0.2 – Ndiudze kwamunobva uye ndicharwa…
chipo pamusoro mhando 1.0.0 – Nguva yasvika
chipo pamusoro mhando 1.0.1 – Widgets Your, nzira yenyu
Olivier pamusoro mhando 1.0.2 – Ndiudze kwamunobva uye ndicharwa…
ENDA PANZE pamusoro mhando 1.0.1 – Widgets Your, nzira yenyu
0.7 apc negadziriro yeparutivi basa Bing (MSN) muturikiri bhavhdhe buddypress bugfix kudzora centre CSS sprites vakapa shanduro mipiro eaccelarator Facebook nyepera kubvunzurudza mureza sprites gettext Google-XML-sitemaps shandurudzo google indavhiyu jquery zvikuru kuduku mimwe mitauro parser rusununguko replytocom RSS kutsvaka securityfix SEO mumagariro havukavu enhancements kutanga trac Twitter ui Video Widget wordpress.org Wordpress 2.8 Wordpress 2.9 Wordpress 3.0 Wordpress plugin netori-super-cache xcache
Design kubudikidza LPK Studio
Entries (RSS) uye Comments (RSS)